Cuntada: Wikiida ugu Weyn Awooda
Julia Vashneva, oo ah Semt Maamulaha Guusha ee Macaamiisha, ayaa sheegay in 'Freak Freaks' 'Wikipedia Club' ay ka mid tahay kooxaha ugu caansan uguna caanka ah Facebook. Waxay bixisaa warka ugu qaalisan, ugu gaaban, iyo maqaalada Wikipedia. Laga soo bilaabo 52-hertz whale ilaa Tarrare, wax walba waxaa laga helayaa xubnaha 'Facebook News Feeds - rayban d. Tan iyo markii la aasaasay bishii Sebtembar 2013, kooxdani waxay si weyn u korodhay waxayna noqotay bulsho ka badan 30,000 xubnood oo firfircoon. Halkan waxaan ka wada hadalnay qodobada ugu caansan iyo kan ugu dambeeyay ee Wikipedia.
Kentucky Hilibka Duufaanta
Ma aha fal argagax xun, laakiin dhacdada cimilada aan caadi ahayn. Gobolka Bath, Kentucky, bishii Maarso 1876, qaybo hilib gaar ahaan hilibka lo'da ayaa ku da'ay degaan ah 100 yard oo dhowr daqiiqo ah. Dabadeed, qaybaha ayaa loo aqoonsaday inay yihiin unugyada sanbabada faras
boqoradda Balobedu waxay ka tirsanayd Koonfur Afrika. Waxaa la rumaysan yahay in ay xakamayso daruuraha iyo roobabka. Sanado badan, carshigu wuu madhan yahay sababtoo ah muran ka dhashay caruur aan sharci aheyn oo ka mid ah haweenka roobka leh iyo dhaleeceynta Modjadji ee qaab nololeedkiisa gaarka ah iyo qarsoodi ah.
Gabaygan iyo Buddhistaan ​​ayaa waxay awood u leeyihiin in ay jinniyada u beddelaan ilaahyada ilaalinta ka dib markii ay ku dhufteen guska oo lagu magacaabo Thunderbolt of Flaming Wisdom. Kunley ayaa sidoo kale caan ku ah farsamooyinka qoraalka ah ee rinjiyeynta rinjika ah ee derbiyada Bhutan..
Carol Vincent ayaa ka dhintay gurigiisa oo ku yaala London, kaas oo u muuqday mid aan caadi aheyn oo aan caadi ahayn markii meydkii dhintay uu jiifsaday muddo saddex sano ah. Sababtoo ah biilasha oo dhan si toos ah ayaa loo bixiyay, telefishinkeeda iyo kuleylka ayaa la socday, qeybta kiradana sidoo kale ayaa la bixiyay, qof kastaa wuxuu rumaysnaa in Joyce uu noolaa. Maalmo ka hor dhimashadeeda, gabadhan yar ayaa xidhiidhkii la gashay qaraabada iyo asxaabteeda.
Nin u dhashay Jarmalka wuxuu caan ku noqday inuu dilo oo cuno qof la ogolaaday inuu cuno. Waxa uu ku dhajiyay cinwaanka goobta, Cannibal Cafe, halkaas oo Meiwes uu sheegay in uu raadinayay qof lagu dilo oo la wada baabbi'iyo. Nin ka soo jeeda Berlin, Bernd JR "Armando Armando, ayaa uga jawaabtay xayeysiiskiisa iyo Miewes guska 'Brandes' guska oo si haboon u kariyay.
Jennifer iyo June Gibbons
Waxayna ahaayeen kuwo insiga ka mid ah inay Magangalaan kuwo Jinniga ka mida markaasna u kali yeelayno, Inkasta oo ay isku dayeen in ay kala soocaan iyaga oo u diraya iskuulo kala duwan, mataano ayaa noqdey quluq iyo iskudubarid ilaa inta ay dib u midoobeen noloshooda. Dhawaan, waxay noqdeen dambiilayaal waxaana loo diray isbitaalka, halkaasoo ay ku jireen afar iyo toban sano.
George Herriman wuxuu ka mid ahaa muusikada ugu caansan uguna quruxda badan ee qarniga 20aad. Wuxuu caan ku ahaa jilitaanka majaajilada ee cinwaankeedu yahay Krazy Kat. Waxa uu naftiisa u aqoonsaday sida Giriig ah, laakiin shahaadada dhalashada waxay liis gareeyaa George sida midabo kala duwan oo isku dhafan.
Abdel wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu caansan ee muusikada Carabta iyo Masaarida. Waxa loo arkaa inuu yahay aasaasihii muusikada carabiga, muusigiisuna wuxuu soo jiitay kacdoonkii Masaarida ee 2011. Wuxuu is diley 1977-dii, adduunkuna marnaba kuma jirin Big Pimpin oo aan haysanin